के निखिल उप्रेतीले ‘भिलेन’ बाट हात झिकेका हुन् ? « Ramailo छ
के निखिल उप्रेतीले ‘भिलेन’ बाट हात झिकेका हुन् ?
प्रकाशित मिति : Jan 1, 2019
निखिल उप्रेती स्टारर फिल्म ‘भिलेन’ पौष २७ गते देखि रिलिज हुँदैछ । प्रदर्शन मिति नजिकिदै गर्दा काठमाडौंमा मंगलबार प्रेस मिट आयोजना गरिएयो । उक्त कार्यक्रममा नायक उपे्रती भने सहभागी भएनन् ।
फिल्मको मुख्य नायक नै किन प्रेसमिटमा आएनन् त ? ‘निखिल जी ढाका टोपी दिवसको कार्यक्रमा व्यस्त हुनु हुन्छ । उँहाले हामीलाई पहिल्यै जानकारी दिनु भएको थियो । आज उपस्थित नभएपनि फिल्मको प्रमोशनमा उहाँ हिड्नु हुन्छ ।’ प्रेसमिटमा उपस्थित फिल्मका सदस्यले भने । फिल्म युनिटसँग चिसो सम्बन्ध भएर नआउनु भएको हो ? भन्ने अर्को प्रश्नमा ती सदस्यले भने ‘त्यस्तो केहि होइन त्यस्तो केहि समस्या छैन । हामीले कार्यक्रम हिजो राख्ने कुरा भएको थियो तर भएन । उहाँको कार्यक्रय व्यस्तताले नआउनु भएको हो । फिल्ममा उहाँकै आवाज छ ।’ निर्माण पक्षले निखिलसँग सम्बन्ध सुमधुर रहेको दाबी गरेको छ । तर फिल्म नगरीमा भने भिलेनबाट निखिलले हात झिकेको चर्चा छ ।
ढाका टोपी दिवस परेकाले नायिका शिल्पा पोखरेलले प्रेसमिटमा उपस्थित सबैलाई ढाका टोपी लगाइदिइन् । भिलेन फिल्मबाट आफु निकै नै आशावादी रहेको समेत शिल्पाले बताइन् । भिलेन मा कोही पनि भिलेन छैन । ‘समय, समाज र परम्परा नै हाम्रो भिलेन हो’, भिलेन बारे शिल्पाले प्रष्ट्याइन् । शिल्पासँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
फिल्ममा निखिल र शिल्पा सँगै निशा अभिकारी, कपिल खत्री लगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ । देवेन्द्र पाण्डेको निर्देशन रहेको फिल्म भिलेन मा दिपक श्रेष्ठ र सुरज खड्का कार्यकारी निर्माताको रुपमा रहेको छन् । निर्मातामा कपिल खत्री र बादा बहादुर श्रेष्ठ छन् ।